यी सपनाले दिन्छ १० दिनपछि हुने घटनाको बारेमा संकेत, कतै तपाईले देख्नुभयो की ? - Info Nepal
INFONPLरोचकयी सपनाले दिन्छ १० दिनपछि हुने घटनाको बारेमा संकेत, कतै तपाईले देख्नुभयो की ?
यी सपनाले दिन्छ १० दिनपछि हुने घटनाको बारेमा संकेत, कतै तपाईले देख्नुभयो की ? बैज्ञानिकहरु भन्छन् सपना हाम्रो दवाइका इच्छाका झलक हुन् । शास्त्रले भने यो कुरा मान्दैन । शास्त्रका अनुसरा सपनाको सम्बन्ध सिधा आत्मासँग हुन्छ । सपनाले देश काल र परिस्थिति एवं भविष्यको संकेत गर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
कुन बेला देखिएको सपनाको अर्थ के ? सूर्य उदाउनु भन्दा ७२ मिनेट अघि देखिएको सपनाले १० दिन पछि हुने घटनाको संकेत गर्छ । त्यस्तै रात्रिको सुत्ने वित्तकैको समय अर्थात प्रथम प्रहरमा देखिएको सपनाले एक वर्षमा र दुईतीय प्रहरमा देखिएको सपनाले ६ महिना भित्र हुने घटनाको संकेत गर्छ ।
सपना देख्ने वित्तिकै जाग्नु: कुनै पनि सपना देख्ने वित्तिकै निद्रा टुट्छ र त्यसपछि निद्रा नै लागेन भने त्यस्तो सपना सत्य हुन धेरै समय लाग्दैन तर निद्रा लाग्यो भने सपना निष्फल हुन्छ । कुनै पनि सपना अरुलाई सुनाएपछि त्यसको प्रभाव कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । सपनामा कुनै विपत्तिमा परेर भाग्न नसकेको देख्नु भो भने बुझ्नुस् जीवनमा पनि कुनै आपत् आइलाग्दै छ ।
उडेको सपना: यदि सपनामा हावामा उडेको देख्नु भो भने तपाइँको योजना सफल हुने संकेत दिन्छ भने जागिरमा पनि पदोन्नति हुन्छ । तर उड्दा उड्दै कुनै बस्तुसँग ठोक्कियो भने चाँहि सफलतामा बाधा आइलाग्छ ।
मरेको देख्नु: सपनामा मृत्यु भएको वा लाश देख्नु शुभ मानिन्छ । सर्पले टोक्नु वा सिंह तथा हात्तिले लखेट्नु पनि राम्रै मानिन्छ ।तर कुकुरले टोकेको वा नाङ्गो शरिर भएको ब्यक्ति देखिनु एवं भीरबाट खसेको वा भैंसीको हुल देख्नु नराम्रो संकेत हो ।
के तपाईं नुहाउदा पि`साब फेर्नुहुन्छ? के हुन्छ फेर्दा?
यस्ताे एउटा त्यस्तो रुख जुन रुखमा फल्छन् ४० थरीका फलफूल (भिडियो हेर्नुस्)
राम्री युवतीसँग विवाह गर्नुको यस्ता बेफाइदा !